ई-रातो खबर २०७६, १९ साउन आइतबार ००:१३ August 4, 2019 1188 Views
कमान्डर तीर्थ भन्दैछन्– सम्झनुहोस्, दुस्मनले यही हतियारका भरमा गोरखा पन्द्रुङका १३ बर्से बालक दिलबहादुर रम्तेलको शरीर ढालेको छ । आफ्ना गुरुलाई आतङ्ककारी भन्दै मार्न लाग्दा कुन स्वाभिमान मन चूप लागेर बस्न सक्थ्यो ? यही हतियारको भरमा उसले मस्त बिष्टको हत्या गरेको छ । गाउँगाउँमा रोमियो र सर्च अपरेसन चलाएर कयौँ निर्दोष जनताको रगतको खोलो बगाएको छ । आज जनताले आफ्नो दुःखसास्ती गरेर खानसमेत पाएको छैन । मुट्ठीभर शोषकहरू सत्तामा रजाइँ गरिरहेका छन् तर लाखौँ युवा बेरोजगार भएर सहरका गल्ली, भारतीय सहरका कुल्ली, बहादुर अनि खाडीको तातो घाममा ऊँट चराउन विवश छन् । नेपालबाट सामन्तवादको अन्त्य नभएसम्म बिदेसिएका युवाले मुलुकमा रोजगारी पाउने छैनन् । जनवाद स्थापना नभएसम्म नेपालले स्वतन्त्र र सार्वभौम भएर विश्वसामु शिर ठाडो पार्न पाउनेछैन । विस्तारवादले तयार पारेका नेपाली चाकरहरूले सुगौलीदेखि १९५०, ६५ का राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गरिरहेका छन् भने आफूलाई जनताका पार्टी भनाउने काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले कोसी र गण्डकको राष्ट्रघात दोहो¥याउँदै महाकाली पनि भारतलाई सुम्पेका छन् । गाउँदेखि सत्ताको केन्द्रीय भागसम्म लूट, भ्रष्टाचार, कमिसनमा देश डुबेको छ । यो मोर्चाको विजयले हाम्रो समग्र विजयअभियानको नेतृत्व गर्नेछ । हामी दुस्मनहरूका सेवक बसेको चौकीको खरानी बोकेर फर्कनेछौँ । हामी आफू सकिएर पनि सर्वहारा वर्गको विजयका लागि दुस्मनलाई हराउनेछौँ र यो लालभूमि अझै रातो बनाएर भए पनि भोलिको सूर्योदयसँगै विजयको पताका फहराउँदै हाम्रो हेडक्वार्टरलाई खुसीको सन्देश सुनाउनेछौँ ।
कमान्डर तीर्थको कासनपछि सबै उन्तीसैजना छापामारहरू झुरुप्प भएर नारा लगाउँछन् ः महान् जनयुद्ध जिन्दावाद ! वीर सहिदहरू अमर हुन् । बेथानको लडाइँ जित्छौँजित्छौँ । दुस्मनका हतियार खोस्छौँखोस्छौँ ।
कम्पनी कमिसार ध्रुव र विवेकलाई दिलमायाको अनुरोधले भित्रभित्रै ईष्र्या जगाउँछ । छापामार कमरेड फत्त भन्छन्– कमरेड, त्यो अवसरको पर्खाइमा त म थिएँ, कसरी तपाईंले मलाई उछिन्नुभयो … ।
कमान्डर तीर्थले छापामार र अन्य कमान्डर– कमिसरको भावना बुझिसकेपछि अझ नम्र हुँदै भने– कमरेडहरू ! युद्धको नियम नाप, तौल र जोखेजस्तो एक रूपको हुँदैन । हामी संसार जित्न हिँडेका योद्धाहरू हौँ । बिनाक्षति दुस्मनको हातको हतियार खोस्नु र पार्टी हेडक्वार्टरलाई बुझाउनु हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो । म ठान्छु, बलिदानको कोटा चुक्ता गर्नुप¥यो भने सबैभन्दा पहिलो हकदार मैले बन्न पाउनुपर्छ टिम कमान्डरको नाताले । बलिदानका लागि पनि सर्त छ– दुस्मनको पराजय र क्रान्तिकारीको विजय ।
‘मुट्ठीमा बोकेको ग्रिनेट कतिबेला दुस्मनको क्याम्पमा फ्याँकेर उसको हातको हतियार कब्जा गर्ने होला’, दिलमायाको मनमा झन्झन् हुटहुटी चल्न थाल्छ । उनी केही समयअघि कमिसार आलोक र कमान्डर तीर्थका जोशिला कासनहरू सम्झिन थाल्छिन्– ०५२ साल फागुन १४ गते गोरखाको पन्द्रुङमा १३ वर्षीय दिलबहादुर रम्तेलको बलिदान, १५ गते रुकुमको पीपलमा ६ जना खत्री दाजुभाइको सामूहिक हत्या, सोही दिन जाजरकोटको नलसिंहमा दुईजनाको हत्या, ०५३ वैशाख २५ गते सिन्धुलीको अमलेमा गिरफ्तार भएका दाजुभाइ टीका र ज्ञानेन्द्रको भद्रकाली पु¥याएर हत्या, साउन २६ गते रोल्पा जेलवाङमा ६ जनाको जङ्गलमा पु¥याएर गोली हानी हत्या, मङ्सिर २ गते रोल्पा मिरुलमा बरदान रोकासहित पाँचजनाको हत्या… । आखिर त्यही हतियारको दम्भले मात्तिएको न हो जनविरोधी सरकार ! त्यसलाई निःशस्त्र पार्नैपर्छ । त्यसका लागि जस्तोसुकै त्याग, शौर्य र बलिदानको कोटा चुक्ता गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन मैले…।
अन्तिम ब्रिफिङ र सुझाव सकिएपछि लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्छ छापामार टोली । लक्षित स्थान जतिजति नजिक आइपुग्दैछ, जिम्मेवारीबोध, परिणामको परिकल्पना र हुटहुटीले ह्वात्तै बढाइरहेको छ मुटुको गति ! बाँसको झाङमाथि बाटो, बाटोमाथि ढुङ्गाको गारो र त्यही गारोमा भएको गौँडो उक्लिएपछि भेटिन्छ लक्षित स्थान । छापामार कमान्डर तीर्थ विन्यास मिलाउँछन् छापामारको– सङ्केत र इसाराकै भरमा । एसल्ट ग्रुपमा उनीसँगै माइला, दिलमाया, फत्त, विवेक, धु्रवलगायत सातजनाको टिम छ । संयमका साथ भरुवा बन्दुक परीक्षण हुन्छ । सबै आआफ्ना हातका हतियार परीक्षण गर्छन् ।
मनैमा, लौ माया नमारे…
चौकीभित्र भोज छ सायद । नत्र राति ११ बजेसम्म यति हल्ला नहुनुपर्ने हो । रेक्की रिपोर्टमा १० बजेसम्म उनीहरू सुतिसक्ने उल्लेख थियो । चाल मारेर सुन्छन् कमिसार– आज पानीघाटे कान्छो सहरबाट गाउँ फर्किएको उपलक्ष्यमा भोज खाने भन्दै एउटा घच्चीको भाले दाब्न पाएछ चौकीको हबल्दारले । बाटामुनि कान्छीको भट्टीबाट कोदाको तीनपाने मगाएर कुखुरा र ऐराकले पुसको जाडो भगाउने कार्यक्रम रहेछ उनीहरूको । अलिकति पिएको थियो होला सायद सेन्ट्री बसेको पुलिसले आफ्नो पालो आउनुअघि अनि सम्झियो होला घरमा दुःख गर्दै आफूलाई सम्झिरहेकी श्रीमती र छोराछोरीलाई । त्यसैले त गुन्गुनाइरहेको थियो ऊ : फिरिरी….
गौँडाबाट विद्युतीय गतिमा उक्लिन्छन् प्लाटुन कमान्डर माइला र उदास गीत गाइरहेको जवानको हातको थ्री नट थ्री खोसेर पोस्टतिर फायर गर्न भ्याउँछन् । हाते माइकबाट कासन सुरु भइरहेको छ कमिसारको– माओवादी छापामारले चौकी घेराउ गरिसकेका छन् प्रहरी साथीहरू, हतियार बुझाउनुस्….। हातको ग्रिनेट घुमाएर चौकीको ढोकामा फ्याँक्दै बुरुक्क ढुङ्गाको पर्खालबाट उफ्रिएर एकैचोटि ढोकाबाट फायर खोल्दै गरेको जवानको हातको हतियार समाउन पुग्छिन् दिलमाया । उनले हतियार समाउनु र जवानले थ्री नट थ्रीको फायर खोल्नु एकसाथ हुन्छ । ग्रिनेट पड्किएर थलामै सास फेर्न बिर्सिन्छ जवान । दिलमायाको निधारमै लाग्छ गोली । एउटा हातमा बन्दुक आएको छ उनको । उनी बन्दुक हेर्छिन् र एकपटक मुस्कुराउँछिन् अनि अर्को हात आकाशतिर फर्काउँदै नारा लगाउँछिन्– जनयुद्ध जारी छ, महान् सहिद अमर रहून्… । दिलमायाको हातको थ्री नट थ्री अब माइलाको हातमा आइपुगेको छ र त्यसले ढोकामा देखिएको अर्को जवानलाई ढालेको छ । दुस्मनको ढोकाभित्र ग्रिनेट फ्याँकेर गल्छेडो उक्लिँदै गरेका कमरेड फत्तको छातीमै लाग्छ चौकीतिरबाट आएको अर्को गोली । गोली लागेर पनि केही पाइला हिँड्दै उनी पनि ढल्छन्– जनयुद्ध जारी छ भन्दै ।
पुसको चीसो रातमा बाटामाथि बेथान पानीघाटको पुलिसचौकी जलिरहेको छ । वरिपरिबाट बेथानवासी सयौँ जनसमुदाय भेला भइसकेका छन् पानीघाटमा र नारा लगाइरहेको छ– महान् सहिदहरू अमर रहून् । जनयुद्ध जारी छ…।
रामेछापकी छोरी, क्रान्तिकारी योद्धा दिलमायाको धपक्क बल्लाजस्तो अनुहार अझै चम्किलो बनेको छ । निधारैनेरबाट छेडेको छ गोलीले र साँझ जनसमुदायले अबिरले रङ्ग्याइदिएजस्तो रङ्गिएको छ मुहार । मध्यरातमा पनि झलमल्ल उज्यालो देखिएको छ पानीघाट । काभ्रेको छोरा कमान्डर तीर्थको अग्लो, उज्यालो र गम्भीर अनुहार बलिदानपछि पनि दुस्मनलाई ललकार गर्लाजस्तो देखिइरहेछ । सिपाको छोरो फत्तको शरीर अहिल्यै हिँडिहाल्लाजस्तो सुकसुकाउँदो छ । बाँसको झाङमा लस्करै बनाइएको छ तीनवटा खाडल । पार्टीको झन्डा ओढाएर र राताम्मे अबिरले रङ्ग्याउँदै सयौँ जनसमुदायको बीचमा क्रान्तिकारी कमरेडहरूको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम भइरहेको छ । कमरेड दिलमायाको परिवारका सदस्यका तर्फबाट दिदी, पार्टीका तर्फबाट कमिसार कमरेड आलोक, जनसमुदायका तर्फबाट स्थानीय कमरेड पुष्प, छापामार दलका तर्फबाट कमरेड माइला भावपूर्ण शब्दश्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफूहरू महान् सहिद तीफदिले देखाएको महान् जनयुद्धको बाटोमा हिँडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । तीनैजना महान् सहिदहरूलाई एकएकवटा खाडलमा राखेर अन्तिम संस्कार गरिसकेपछि पराजित दुस्मनका रक्षकहरूलाई हतियारबाहेकका युद्धसामग्री बोकाएर एकातिर महान् विजयको खुसीयाली, अर्कातिर कमान्डरसहित तीनजना छापामार योद्धाहरूको बलिदानीको गहिरो पीडा बोकेर नारा लगाउँछ जनसमुदायले– महान् सहिद तीफदि अमर रहून्, जनयुद्ध जारी छ…।
एक पाइलाबाटै सुरु हुन्छ… ।
कला, साहित्य र संवेदना